Maererano nehuwandu, gore rega rega kune varwere vane 2,5,8 miriyoni vanorwara, 400000-800000 pagore kufa uye 86,5% kuremara chiyero. Zvinoenderana nehuwandu hwevamwe vadzidzi, pakati pevarwere vakapukunyuka varwere, gumi muzana vakapora kushanda vasina hurema hwakajeka, 40% yakasiya hurema hushoma, 40% yaida rubatsiro rwakakosha rwezvigadzirwa, uye 10% yaida kutarisirwa kwakakosha. Mhando dzese dze hemiplegia inokonzerwa ne sitiroko ndiyo inonyanya kuzivikanwa sequelae. Kana vakasarapwa nenguva, vakareruka vanosiya hurema, uhu huchakanganisa hupenyu hwavo nebasa. Ivo vanorema havakwanisi kutarisira hupenyu hwavo pachavo, kwete ivo chete kutambudzika ivo pachavo, asi zvakare kutakura mutoro wakakura kumhuri dzavo. Mushure mekugadzirisa, 90% yevarwere vane hemiplegic vanogona kufamba zvakare uye vanozvitarisira, 30% yavo inogona kutangazve basa. Izvo zvinodiwa kuita kudzorera kwekudzidzira kufamba munzira yekurapa. Nekuda kwepurasitiki yeiyo yepakati sisitimu yetsinga, kunyangwe iyo nerve yacho isingakwanisi kumirazve, tsinga dzayo dzinoputika dzinogona kubuda kuburikidza nemapazi anozotevera e axon, ayo anogona kuita kuti nzvimbo dzakasangana nenhengo dzeshure dzidzorezve kutonga, kusanganisa kugona kwemukati kwemuviri, nekusimudzira kuonekwazve kwebasa retsinga. Uye zvakare, kufamba nekudzidziswa kudzidziswa kunogona kumutsa kushamisika kwevarwere uye kunowedzera chivimbo chavo mukupora. Iyo inonyanya kuve hemiplegic Walkers yatinogona kupa se,
Kumirira nhau kubva kwauri uye tichaedza zvatinokwanisa kuti tiwedzere chero ruzivo rwaunoda.
Zvekare, tarisa kuti isu tese tinokwanisa kuwana zvigadzirwa izvi uye tinotarisira kuti unogona kuwana mamwe masheya pamusika
Nguva yekutumira: Kubvumbi-20-2019